A na-ekpe IATA Travel Pass na ikpe na Central America
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » A na-ekpe IATA Travel Pass na ikpe na Central America
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Akụkọ na -agbasa Panama • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Gọọmentị izizi na ụgbọelu nke mbụ na mba America iji nwalee IATA Travel Pass
Gọọmentị Central America nke mbụ na ụgbọ elu mba ya na-ekwuputa isonye na nnwale nke IATA Travel Pass
IATA Travel Pass ga-adị oke mkpa iji weghachite njikọta ụwa niile ma jikwaa ihe egwu nke COVID-19
Nke a bụ otu ihe dị mkpa iji mee ka njem mba ụwa nwee ike n'oge ọrịa a, na-enye ndị mmadụ obi ike na ha na-emezu ihe niile COVID-19 chọrọ n'aka ndị gọọmentị.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) na-arụkọ ọrụ na gọọmentị nke Republic of Panama na Copa Airlines iji nwalee IATA Travel Pass - ngwa mkpanaka iji nyere ndị njem aka ijikwa njem ha n'ụzọ dị mfe ma nwee ntụkwasị obi ijikwa usoro gọọmentị chọrọ maka nyocha COVID-19 ma ọ bụ ozi mgbochi.
Panama bụ gọọmentị mbụ isonye na nnwale nke IATA Travel Pass nke ga-adị oke mkpa iji weghachite njikọta ụwa niile ma jikwaa ihe egwu nke COVID-19.
Copa ụgbọelu ga-abụ onye mbụ na-ebu ụgbọ mmiri na America iji nwalee IATA Travel Pass.
Iji IATA Travel Pass, ndị njem Copa Airlines ga-enwe ike ịmepụta 'paspọtụ dijitalụ'. Nke a ga - enye ndị njem ohere iji ha tụnyere njem njem ha na COVID-19 chọrọ ahụike maka ebe ha na - aga ma gosipụta na ha na - akwado ihe ndị a. A na-atụ anya ịmalite usoro ikpe mbido na Machị na ụgbọ elu ndị ahọpụtara site na Copa Hub nke America na Panama City.
“Na Copa ụgbọ elu, anyị nwere obi ụtọ ịbụ ndị ọsụ ụzọ na ntinye nke IATA Travel Pass, na-arụkọ ọrụ ọnụ na IATA na gọọmentị nke Panama. IATA Travel Pass ga-eme ka ọ dị mfe ma kwalite nkwenye na mkpa ahụike maka ndị njem anyị. Otu usoro azịza mba ụwa maka paspọtụ ahụike dijitalụ dị ka IATA Travel Pass jidere igodo nke nchekwa njem nke njem na njem, nke bụ ihe dị mkpa na akụ na ụba Panama na Latin America, "Dan Gunn, Onye isi oche Onye isi oche nke Copa maka Ọrụ. .
“Gọọmentị nke Panama na-akwado mmejuputa ngwa ọrụ a dị mkpa nke IATA mepụtara na, site na njikọta ya na ndị nwere oke dị iche iche, ga-enye ndị njem ohere ime ihe gbasara ahụike anyị, si otú a weghachite obi ike na njem na njem, ogidi dị mkpa maka mgbake akụ na ụba nke mba ahụ, ”Ivan Eskildsen, Onye nchịkwa nke Panama Tourism Authority kwuru.
“IATA Njem IATA na-aga n’ihu. Ikpe a, nke mbụ na America, ga-enye ntinye na nzaghachi bara uru iji melite mmemme Travel Pass. Nke a bụ otu ihe dị mkpa iji mee ka njem mba ụwa nwee ike n'oge ọrịa a, na-enye ndị mmadụ obi ike na ha na-emezu ihe niile COVID-19 chọrọ site n'aka gọọmentị. Nick Careen, IATA Senior Vice President for Airport, Passenger, Cargo and Security kwuru, anyị nwere obi ụtọ na anyị na Copa Airlines na gọọmentị nke Panama na-arụkọ ikpe a dị oke mkpa.
“Ugbo elu bu azu nke otutu aku n’uba Amerika. O mewokwa ka nsogbu a kwụsị - na-ebibi nnukwu ọrụ ndị furu efu n'ofe mpaghara ahụ. IATA Travel Pass ga-enye aka inye ndi gọọmentị obi ike na ndi njem emeela ihe ekwesiri ike iji nye ha ohere ijikọ akụ na ụba mpaghara ha na ibe ha na ụwa. Ulo oru Copa Airlines di uku na mpaghara ya na onodu nke Panama mere ka ha buru ndi choro itule IATA Travel Pass, ka Peter Cerdá, onye osote onye isi ala mpaghara IATA nke Amerika kwuru.
Na mgbakwunye na ịlele ihe ndị njem chọrọ, IATA Travel Pass ga-agụnye ndekọ nke nnwale yana emesịa ogige ịgba ọgwụ mgbochi - na-eme ka ọ dịrị ndị njem mfe ịchọta ebe nyocha na ụlọ nyocha na ebe ha na-apụ nke na-agbaso ụkpụrụ maka ule na ịgba ọgwụ mgbochi nke ebe ha na-aga. .
Ikpo okwu a ga - emekwa ka ụlọ ọrụ ikike na ụlọ ọrụ nyocha nwalee iji zigara nsonaazụ nnwale ma ọ bụ asambodo ọgwụ mgbochi nye ndị njem. Nke a ga-ejikwa ma nye ohere maka ozi dị mkpa n'etiti ndị niile metụtara ya na inye ahụmịhe ndị njem na-enweghị ntụpọ.